I-HD Wifi efihliweyo yeKhamera ye-Bluetooth Somlomo (SPY164) | Izisombululo ze-OMG
I-OMG Wifi efihliweyo yekhamera ye-Bluetooth Somlomo, i-HD 1080P (SPY164)
Umlomo weBluetooth Somlomo Umsebenzi: isithethi se-bluetooth enekhamera ye-HD encinane, akukho mntu uya kuqonda ukuba yile ikhamera, unokubona oko kwenzekayo xa wawungekho ekhaya lakho, i-ofisi, ishishini, okanye nayiphi na indawo yokufuna indawo ephephile.
1080P HD Ividiyo: Isisombululo sevidiyo 1920 x 1080P, unokubona oko kwenzekayo ngevidiyo. Iquka ne-2000 mAh ibhetri ehlawulelwayo.
I-Wifi Music Play Ikhamera: I-P2P IP Ikhamera ye-IP Wifi Connection, inkxaso Inkxaso ye-Real time time, ividiyo Ukurekhoda, iifoto zokudubula, ukukhusela ubuqhetseba bakho, Nceda uxhase umboniso wevidiyo wexesha langempela nge-Smartphone APP (ios okanye android) naluphi na ixesha naphi na.
I-Alamu: I-App Real-time Video Ukukujonga ngokukhawuleza koKhuselo lwaseKhaya, Fumana ulwazi ngalunye uqhutywe kwindlu yakho, Xa ubeka umsebenzi usebenze, uya kuthumela isilumkiso sefowuni kunye neefoto zesiganeko kwisixhobo sakho sokuxhuma ukuba i-motion ifunyenwe.
Loop Video Recorder: Ukurekhoda kwe-Loop ngokuzenzekelayo kubhala ngaphezulu iifayili ezindala ukuba imemori izalisekile, nje ukuvumelanisa ixesha kunye ne-PC ukubonisa ixesha elichanekileyo kwisitampu kwiividiyo kunye neefoto, Ukuxhaswa ukuya kwi-128GB (Akufakiwe) ukugcinwa, kuya kufaka ifayili yokuqala xa isikhala sigcwele.
OKUBA UFUNA UKUZIWA NGAPHAMBI UKUPHATHWA KWAKHO:
1. Iikhamera Bluetooth kwaye WiFi imisebenzi iyimfuneko.
2. Ixhasa amanethiwekhi e-2.4G, ayixhasi amanethiwekhi e-5G.
3. Ukusebenzisa ixesha elide, sincoma ukuba uhlale uhlawula xa urekhoda.
Le khamera yeyomntwana wakho, isilwanyana sasekhaya, umongikazi kunye nabasebenzi. Nokuba ufuna ukukhusela ikhaya lakho kunye nabantu obathandayo, jonga izinto ngelixa ungekhoyo. Ungasebenzisa ifowuni yakho, ithebhulethi okanye ikhompyuter ukufikelela nanini na, naphi na
I-Wifi Somlomo Ikhamera
I-P2P IP Ikhamera ye-IP Wifi Connection, inkxaso Inkxaso ye-Real time time, ividiyo Ukurekhoda, iifoto zokudubula, ukukhusela ubuqhetseba bakho, Nceda uxhase umboniso wevidiyo wexesha langempela nge-Smartphone APP (ios okanye android) naluphi na ixesha naphi na.
Umbono ebusuku ukuya kwi-20ft ebumnyameni, umbono we-IR ebusuku ubonakala ngcono xa ityala lihlawulwa. Izibane ezifakwe kwii-infrared zivumela ukuba ikhamera ibone ngokucacileyo ubumnyama obupheleleyo kodwa ezi zibane ezizodwa ze-IR azibonakalwanga ngokupheleleyo kwijiso lomntu, ungalokothi uphoswe ngasiphi na umzuzu.
Xhuma isithethi ngefowuni okanye kwikhompyutha nge-bluetooth. Ungonwabela umculo omhle.
Ukurekhoda kweluphawu ngokuzenzekelayo kubhala ngaphezulu kweefayile ezindala ukuba imemori igcwalisa. Awusoze uyiphose into nokuba inkumbulo iyazalisa.
Uncedisa ikhadi le-SDN le-SDN ye-128GB (ikhadi le-SD alifakiwe kwibhokisi), ividyo inokuphinda iphindwe kwi-App yesicelo kunye ne-software ye-PC.
I-SPY164 -Wifi yeBluetooth yeSithethi seFoto
18462 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-27 Namhlanje